जहाँसम्म लाग्छ जनतासंग सुख दुःखमा रमाउने म नै हुँ । – Education Awardees
जहाँसम्म लाग्छ जनतासंग सुख दुःखमा रमाउने म नै हुँ ।
२७ कार्तिक २०७४, सोमबार १९:०७
अहिले मुलुक नयाँ संविधान अनुसार प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा होमिएको छ । पहिलो र दोस्रो गरि दुई चरणमा हुने निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते हुँदैछ । निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न दलका उम्मेद्वारहरु आमसभाहरुसंगै मतदातासंग मत माग्न अहिले व्यस्त रहेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)का नेता, उद्योगमन्त्री एवं लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट धनकुटाका उम्मेद्वार सुनिलबहादुर थापा पनि अहिले जनतासंग मत माग्न व्यस्त छन् । गृह जिल्ला धनकुटामा थापालाई विकास प्रेमी नेताको रुपमा पनि चिन्ने गरिन्छ । प्रस्तुत छ निर्वाचनकै सेरोफेरोमा रहेर उनै थापासंग हरेकपलले गरेको कुराकानी नेपालीकाे अनलार्इनमा प्रस्तुत गरेका छाै।
चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, धनकुटा तपाईंकै गृह जिल्ला पनि हो, कत्तिको उत्साह देखिएको छ ?
पक्कै पनि अहिले नेपाली कांग्रेसको समाजवादको सिद्धान्त र राप्रपा प्रजातान्त्रिकको साझा उम्मेदवारकोरुपमा म धनकुटामा चुनावमा होमिएको छु । जनताको घरघरमा पुगिरहेको छु । उहाँहरुको साथ, सहयोग पनि उत्साहजनक रुपमा पाइरहेको छु । मेरो आफ्नै गृह जिल्ला भएकाले पनि यहाँका सबै कुराहरु मलाई थाहा छ । यहाँका जनताको समस्या मेरो पनि समस्या हो । यहाँका जनताको चाहना मेरो पनि चाहना हो । त्यो कुरा जनताले पनि बुझेका छन् । त्यसैले अहिले मेरो लागि उत्साहजनक बाताबरण बनेको छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनको साझा उम्मेदवारकोरुपमा मलार्य पाउँदा जनता थप उत्साहित हुनुहुन्छ ।
त्यहाँका जनताको के आशा रहेछ, घरदैलो गर्दा के पाउनुभयो ?
विशेष गरेर यहाँका जनताहरु दुईवटा कुराहरुमा धेरै अपेक्षा गरेका छन् । पहिलो धनकुटालाई १ नम्ब्र प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्छ भन्ने दोस्रो धनकुटालाई नमुना जिल्ला बनाउँदै समृद्ध बनाउनु पर्छ भन्ने नै छ । अन्य विकासका कुराहरु पनि छन् तर विशेष गरेर यी दुई कुराहरु गर्नैपर्ने मुख्य अभिभारा जनताले सुम्पनुभएको छ ।
अहिले तपाई मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, पहिला पनि मन्त्री हुनुभयो, मन्त्री भएपछि विशेषगरी धनकुटाका जनताका लागी के–के गर्नु भयो ?
धनकुटा ग्रामिण विकास र ग्रामिण उद्योगका लागि महत्वपूर्ण र उपयुक्त स्थान भएकाले नै मैले पहिलो काम घरेलु र ग्रामीण उद्योग स्थापना गरेको छु । विदेश निर्यात गर्न सकिने मध्ये घरेलु हस्तकला र अल्लो लगायतका घरेलु सामानहरु उत्पादन गर्ने तर्फ नै ध्यान छ । त्यसैकालागि औद्योगिक ग्राम बनाउने अभियानमा हामी जुटेका छौँ । स्थानीय महिला तथा स्थानीय बासिन्दाको सहभागितामा लघु उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न ढाका उत्पादन गर्ने कामलाई प्रोत्साहन गर्ने । त्यस्तै महिला सशक्तिकरणका लागि ५ लाखसम्म विना धितो ऋण दिने व्यवस्था मिलाइएको छु । विभिन्न स्थानमा बाटोघाटो बनाउने काम पनि मेरै कार्यकालमा भइरहेको छ ।
निर्वाचनमा तपाईलाई कम्युनिष्ट गठबन्धनको चुनौती कत्तिको देख्नु भएको छ ?
चुनाव लड्दा चुनौती त हुन्छ नै । तर कम्युनिष्ट गठबन्धन बनको बाघले भन्दा पनि मनको बाघले खाने भो भने जस्तो प्रचार भइरहेको छ । मेरो जिल्लामा हल्ला गरिए जस्तो केहि छैन कम्युनिष्ट गठबन्धनको प्रभाव धेरै नै फिका छ भन्दा पनि हुन्छ । सबै अनुभव बटुलिसकेको मान्छे हुँ म । पहिले पनि यस्ता चुनौती सामना गरेरै आएको हुँ अहिले पनि यसमा डटेर लड्छु । पहिलो ४ बर्षे कार्यकालमा मैले गरेको काम धनकुटाबासीले देख्नु भएको छ । मैले आफुले सकेको योगदान दिएको छु । त्यसैले फेरी पनि मलाइ नै चुन्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
कम्युनिष्ट गठबन्धनको जुन हाउगुजी देखाएर एक प्रकारको प्रचारबाजी छ त्यस्तो केही छैन हैन ?
हो त्यस्तो केहि छैन । कम्युनिष्टहरुको हल्ला त सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सिमित छ । जनतामा केहि छैन । स्थानीय स्तरमा जनताको घरदैलोमा पुग्दा त्यस्तो केहि पनि छैन । नेपाली जनताहरु लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बाँच्न चाहन्छन्, प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा बाँच्न चाहन्छन् । त्यसैले नेपाली जनता अब फेरी पनि कसैले देखाएको सपना र आश्वासनमा पर्दैनन् भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । लोकतान्त्रिक गठबन्धनको जित सुनिश्चित छ ।
अहिले भनेको कम्युनिष्ट र लोकतान्त्रिक गठबन्धनमै मुख्य प्रतिष्पर्धा देखिन्छ तथापी धनकुटावासीको बुझाईमा तपाइले के पाउनु भाएको छ ?
कसले काम गर्न सक्छ र कसले हल्ला मात्र गर्छ काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा यहाँका जनताले छुट्याइसक्नु भएको छ । जसले विकासको काम गर्छ, जसले स्थानीय जनताको भावना बुझेको छ । जो यहाँका बासिन्दासंग भिजेको छ, जो जनताको सुख दुःखमा साथ रहन्छ उसैलाइ जनताले विश्वास गर्छन् । त्यसैले अब कसलाई जिताउने कसलाई हराउने जनताको हातमा हो । मलाइ जहाँसम्म लाग्छ जनतासंग नजिक भएर सुख दुःखमा रमाउने म नै हुँ । त्यसैले यो पटक पनि धनकुटाबासीले मलाई नै चुनेर पठाउनु हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
भनेपछि फेरी पनि जनताले तपाईलाई नै जिताउनेछन् भन्नेमा तपाई ढुक्क हुनुहुन्छ ?
पक्कै पनि म ढुक्क छु र विश्वस्त पनि छु । किनभने जुन अभिभारा दिएर जनताले मलाई पठाउनु भएको थियो पहिला त्यो बेला पनि मैले मेरो जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा निभाएको छु । यहाँका जनताले बुझेका छन् मलाई । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सवालमा हामीले खेलेको भुमिकालाई मतदाताले भुल्न सक्नुहुन्न । चुनाव भनेको चुनौति हो तर म निर्भिक भएर यसमा लागेको छु र जित हाम्रै हातमा छ । यसमा कुनै शंका छैन ।
फेरी पनि सुनिलबहादुर थापालाई धनकुटाका मतदाताले किन भोट दिने ?
पक्कै पनि यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । मैले संविधान सभाको निर्वाचनका बेलामा ४ वटा प्रतिबद्धता जनतासंग गरेको थिए । ती चारै प्रतिबद्धता मैले पुरा गराउन सफल भएको छु । त्यो बेला मैले यहाँका मतदातासंग प्रतिबद्धता गरेको थिए कि पहिलो म संविधान दिन्छु । दोस्रो अखण्ड धनकुटा बनाउने छु । तेस्रो विकासका कामहरु गर्नेछु । र चौथो भनेको प्रदेश नम्वर १ को राजधानी धनकुटा बनाउन म पूर्ण रुपमा लाग्छु भनेर भनेको थिए । ती सबै कुराहरुले अहिले पूर्णता पाउँदै गएको छ । मैले विकासका कामहरु गर्न सफल भए । पूर्वाधारको विकास, खानेपानी, विद्यालयको जिर्णोद्वार गर्ने काममा म लागि नै रहेको छु । अखण्ड धनकुटा राख्न हामी एकताबद्ध भयौँ । सफल भयौँ । अब प्रदेशको राजधानी बनाउने काम बाँकी छ । त्यो पनि हाम्रो जितसंगै सुनिश्चित हुन्छ । त्यसैले जनताले जति पनि अभिभारा सुम्पनु भएको थियो ती सबै अभिभारालाई मैले क्रमैसंग पुरा गर्दै आएको छु । अझै पनि धेरै कुराहरु गर्न बाँकी छ । मैले हिजो गरेको बाचा पुरा गरेकाले जनतामा विश्वास छ । सुनिलबहादुर थापा बाहेक अरु हुनै सक्दैन भन्ने आवाज छ जनतामा । त्यसैले मेरो विकल्प अरु देखेका छैनन् यहाँका मतदाताले ।
सम्पूर्ण पुरुष मन मनै महिलालाई बलात्कार गर्छन्	७ माघ २०७४, आईतवार १७:४३